China Multi-yezihlunu Distal Femur Tshixa Plate mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
1. Uyilo lwendandatho enama-axial amaninzi kwindawo eyinxalenye yokuhlengahlengiswa ingelosi ukuze ihlangabezane nemfuno yeklinikhi;
2. Izinto zeTitanium kunye netekhnoloji yokuqhubekeka phambili;
3. Uyilo lweprofayili esezantsi luyanceda ukunciphisa ukucaphuka kwethishu ethambileyo;
4. Umphezulu wentsimbi;
5. Uyilo lobume be-anatomical;
6. I-Combi-hole inokukhetha zombini izikrufu kunye ne-cortex;
Ukufakelwa kwamathambo kwi-axial distal femur yokutshixa ipleyiti kufanelekile kukwaphuka komfazi.
Isetyenziselwa ukujija i-.05.0, screw4.5 isikrufu se-cortex, Φ6.5 isikrufu sokurhoxisa, ehambelana nesiqendu se-5.0 samathambo.
Ukucaciswa kwePlate yePlati ye-Femur yokuTshixwa kwe-Multi-axial
Ekhohlo iiHole 9
Ekunene iiHole 9
Ekhohlo iiHole ezili-11
Ekunene iiHole ezili-11
Iplate yokuVala yaBasetyhini
1. Izinto zeTitanium kunye netekhnoloji yokuqhubekeka phambili;
2. Uyilo lweprofayili esezantsi luyanceda ukunciphisa ukucaphuka kwezicubu ezithambileyo;
Ukufakwa kwezamayeza kwipleyiti yokutshixwa kwe-femal kufanelekile ekuqhekekeni kwe-femur.
Isetyenziselwa ukujija i-.05.0, screw4.5 isikrufu se-cortex, screw6.5 isikrufu sokurhoxisa, ifaniswe neseti yezixhobo zonyango ze-5.0.
Ukucaciswa kwePlate yeFemur yokuDibanisa
Amacwecwe amathambo eTitanium njengezinto zokufakelwa kwamathambo. Zibonelelwe ngamaziko ezonyango, kwaye zenzelwe ukunyanga indawo eziqhekezayo zezigulana eziphantsi kweanesthesia ngokubanzi ngoogqirha abaqeqeshiweyo okanye abanamava kwigumbi lokusebenza ngokuhambelana neemfuno zokusingqongileyo.
Ukutshixa ipleyiti kunye neesistim zokujija zinezibonelelo ngaphezulu kweenkqubo zesiqhelo zescrew. Ngaphandle kolu nxibelelwano lusondeleyo, ukuqiniswa kwezikrufu kuya kutsala amacandelo amathambo ukuya kwipleyiti, kukhokelela kutshintsho kwindawo yamacandelo angabonakaliyo kunye nolwalamano lwe-occlusal. Iipleyiti eziqhelekileyo / iinkqubo zokujija zifuna uhlengahlengiso oluchanekileyo lweplate kwithambo elingaphantsi. Iipleyiti zokutshixa / iinkqubo zokujija zibonelela ngezibonelelo ezithile ngaphezulu kwezinye iipleyiti malunga noku. Olona loncedo lubalulekileyo kukuba kunokuba yimfuneko ukuba ipleyiti inxibelelane ngokusondeleyo nethambo elisisiseko kuyo yonke imimandla. Njengoko izikrufu ziqinisiwe, "ziyatshixa" kwiplat e, ngaloo ndlela kuzinziswa amacandelo ngaphandle kwesidingo sokucinezela ithambo kwipleyiti. Oku kwenza ukuba kungenzeki ukufakwa kwescrew ukutshintsha ukunciphisa.
Ipleyiti yethambo elitshixwayo lenziwe yi-titanium emsulwa, ejolise ekubeni isetyenziselwe ukwakhiwa kwakhona kunye nokulungiswa kwangaphakathi kweClavicle, imilenze kunye nokuqhekeka kwamathambo okungaqhelekanga okanye iziphene zethambo. Imveliso ibonelelwa ngephakeji engenazintsholongwane kwaye ijonge ukusetyenziswa kuphela.
Imingxunya yokudibanisa equka imingxunya enomsonto kunye nemingxunya yoxinzelelo kwipleyiti yokutshixa inokusetyenziselwa ukutshixa kunye nokucinezelwa, ekulungele ukuba ugqirha akhethe. Unxibelelwano olulinganiselweyo phakathi kwepleyiti yethambo kunye nethambo kunciphisa ukutshatyalaliswa kwegazi le-periosteal.Iipleyiti zokutshixa / iinkqubo zokujija kukuba aziphazamisi ukuthambeka kwethambo le-cortical bone ngokufana neepleyiti eziqhelekileyo, ezicinezela umphantsi wepleyiti kwithambo le-cortical .
Iipleyiti zokutshixa / iinkqubo zokujija zibonisiwe ukubonelela ngokuzinza okuzinzileyo kunaleyo ingavaliyo / iinkqubo zokujija.
Ukusetyenziswa kwenkqubo yokutshixa ipleyiti / ukujija kukuba izikrufu akunakulindeleka ukuba zikhulule kwipleyiti. Oku kuthetha ukuba nokuba isikrufu sifakiwe kwisithuba sokwaphuka, ukukhululeka kwesikrufu akuyi kwenzeka. Kwangokunjalo, ukuba ufakelo lwamathambo lujijelwe kwipleyiti, isikrufu sokutshixa asizukukhulula ngexesha lesigaba sokudibanisa kunye nokuphilisa. Uncedo olunokubakho kule propati yenkqubo yokutshixa ipleyiti / isikrufu kukuhla kweziganeko zokudumba okubangelwa kukhululo lwezixhobo. Kuyaziwa ukuba izixhobo ezikhululekileyo zisasaza impendulo yokuvuvukala kwaye zikhuthaza usulelo. Ukuze izixhobo zentsimbi okanye ipleyiti yokutshixa / inkqubo yokujija ikhulule, ukukhululeka kwesikrufu kwipleyiti okanye ukukhulula zonke izikere ezivela kufakelo lwamathambo kuya kufuneka zenzekile.
Egqithileyo Iplate yokuVala i-Multi-axial Proximal Femur
Okulandelayo: Inkqubo ye-Multi-axial Medial Tibia Plateau yokutshixa iPlate-5.0
Ipleyiti yokutshixa iVolar -Uhlobo lweTorx (encinci kunye neLa ...
I-Anterior Humeral Plate yokutshixa okumile
Ipleyiti yokutshixa iClavicle yokwakhiwa kwakhona (embindini ...